Topnepalnews.com | त्यो डच केटी ! -ध्रुब शर्मा
Posted on: February 08, 2018 | views: 4140
क्रिशमसको बिदाईसगै नया सालको आगमनले माहोल रमाइलो थियो । छ फुटे त्यो डच (नेदरल्याण्डको) केटी हातमा गिलास समाउदै मतिर नै लम्केको देखे, उ सारै सुन्दर देखिन्थी पहिरनमा ।हातमा गिलास,गिलासलाई सेतो न्याप्किनले बेरेको । सायद गिलासमा बियर हुदो हो, पछि भेउ पाए ।
म कुनामा ओस्लोको एक नाइट क्लवको रात्रीकालिन जीवन हेर्दै थिए। पश्चिमेली जीवन अनि समाजको धोरथेर मेसोपाउन यस्ता नाइटक्लव राम्रै हुन्छ । विश्वविद्यालयको अध्ययन सकिएको, मनमा पढाईको बोझ थिएन, भारि मन हल्का थियो र परफुल्ल ।
यता नेपालमा बिहानको पाँच बज्न लागेको हुदो हो, श्रीमतीसँग गफ गरीकन बिदा भैसकेको थिए । म क्लवमा आको कुरा गर्दैगर्दा उनीठट्टा गरेर धेरै नपिउनुहै तिम्रो शरीरले सहदैन भनेको सम्झे । हातमा थियो सोडा पानीको गिलास ।
यो डच केटीसँग मेरो अनौठो मित्रता या भनौ खटपट भो नर्वेमा अध्यनको क्रममा । सन् २०१५ को अन्त्यतिरको कुरा हो ।
यूरोपमा आप्रबासीहरुको मुद्दाले यहाँको राजनीतिमा ठुलो तरंग पैदा गर्यो । विश्वविद्यालयको १० क्रेडिटको कोर्श आप्रबासीहरुको बारेमा गर्नुपर्नेभो । देशको आप्रबासी ग्रहण गर्नसक्ने क्षमतालाइ मोटामोटी हेरेर नीतिगत सुझाब दिनुपर्ने । यो हाम्रो टिम प्रोजेक्ट।
टिममा विश्वविद्यालयमा अध्यनरत नेपालबाट म, केन्याबाट एक मन्त्रालय स्तरिय सरकारी अधिकारी, नेदरल्याण्डबाट यहि केटी र इरानबाट एक गरि चार जना थियौ । प्रोफेसरले हामीले गर्नुपर्ने काम दिए, कामको बाडफाड भो, हामीसँग दुई महिनाको समय थियो, काम गर्ने प्लान तयार गरियो ।
प्लान अनुसार काम सुरु भो । उसको कामको गति असाध्यै चाडो थियो । म बिदेशी विश्वविद्यालयको पढाइको अनुभब पहिले चोटी लिदैथिए । अरुको पनि गति मेरो जस्तै जस्तै नै हो।हाम्रो र बिदेशी विश्वविद्यालयमा सिकाई र गराईमा मैले ठुलै भेद पाउदै थिए, मेरो लागि राम्रो सिकाई थियो ।
उसको र हाम्रो प्रगति समानान्तर हुन सकेन ।
उसँग हामी सहयोग तलिन धेरै कोसिस गरियो तर सारै कठिन ।
मसँग समय छैन भन्दै पन्छिन्थी यात अरुसँग सोध भन्थी ।
हाम्रो समूहभित्रको खटनपटन प्रोफेसरसम्मै पुग्यो ।
हाम्रो प्रगति बैठकमा मैले कुरा गर्ने निधो त गंरे तर उ कुरा सुन्दिन्थी । उसको अग्रेजी यती छिटो छ कि हामी तीन जना धेरै चोटी अकमक्क परेकाछौ । यूरोपमा डचहरु धेरै राम्रो अंग्रेजी बोल्नेमा चिनिन्छन।अझै मलाई याद छ, मेरो कलासमा एक जना अमेरिकन प्रोफेसरले चार डच साथीलाई भनेको ।
तिमीहरु छिटो छिटो अंग्रेजी बोल्छौ अरु साथीहरुलाई बुझ्न गारो हुन्छ होला अलि बिस्तारै बोल ।
एक जना इरानको साथी र त्यो केटीको बीचमा धेरै कुरा मिलेन । केटीले कम्प्लेन गरिकन हामीलाई बैठकमा डाकियो ।
मैले हाम्रो पढाइको गति एकै नभएको र यसले गर्दा टिममा काम गर्न अलि असजिलो भएको कुरा गरे। कुरा सल्टियो एक पालाको लागी ।
कार्यक्रम प्रमुख र प्रोफेसरले समुहमा समन्वयको बारेमा लामो भासण गरे । जुन म नेपाल छदा अरु कसैलाई दिन्थे, अहिले आफु नै सामेल भाकोसमुह समस्यामापर्यो । समुह समन्वयमा पनि स्कोर थियो त्यो कोर्षमा, हामीले त्यो स्कोर गुमाउछौ कि भन्ने ठुलो पिर भो अरु हामी तीन जनालाई।केन्याको साथीले समुहमा नबस्ने कुरा मसँग गरिसकेको थियो । जेनतेन सकाउनुपर्छ भन्ने जोडबलले प्रोजेक्ट सकियो।तथापीहामी चार जना राम्रो ग्रेडमानै पास भयौ।
त्यो केटी अब मेरो मानसपटलमा एक डच असहयोगी केटीमा चित्रित भइ।मेरो भोगाईले भन्यो डच केटी घमण्डी र समुहमा काम गर्न अपठ्यारो हुन्छन ।
त्यो कोर्श सकियो, भेट हुदा औपचारीक हेलो हाइ मात्रामा मित्रता सिमित भयो एक सेमेस्टरभरी।
अर्को सेमेस्टरमा उ इटाली गइ पढाईको सिलसिलामा ।
दुई बर्सको एकेडेमिक कार्यक्रम मैले ३ महिना ढिलो गरि सकाए । हामी फेसबुकमा साथी थियौ, कुरा त हुन्थेन। ग्रुपमा मेसेज बाहेक, अहिले धेरै भो मैले मेरो फेसबुकको वालमा उसको कुनै पोस्ट देख्दीन।
आज अचानक क्लवमा उसले मतिर लम्केर मेरो नाम बोलाइ, म झल्याँस्स भए।
उसले अंग्रेजी लवजमा कुरा सुरु गरि।
मैले मेरो नाम सम्झेकोमा धन्यवाद दिए।
अहिले नर्वेको एक प्रठिस्थित संस्थामा काम गर्दिरहिछे । उसलाई जानकरी रहेछमेरो थेसिसको बारेमा।
मलाई बधाई दिई।
फेरी धन्यवाद फर्काए ।
मेरो प्रोफेसरबाट थाहा पाए।तिमीले नेपाली लेबर माइग्रेसनमा काम गरेछौ,खुशी लाग्यो।
बिगततिर कुरा लगी।हाम्रो प्रोजेक्टमा अलिअलि के के नमिलेको जस्तो भो है ।
मैले सुनिरहे ।
मैले तिमीहरुलाई सहयोग गर्न सकिन। म धेरै तनाबमा थिए त्यो २ महिना, मेरो केटा साथीसँग झन्डै ब्रेकअप हुनै लागेको।तर जे भो हाम्रो ग्रेड त राम्रो आयो नि।त्यो घटनालाई सजिलोसँग लेउ यात भुल्देउ।
बरु नेपालमा केहि काम गर्ने मेरो मन छ के गर्ने होला ?
इयुसँगको साझेदारीमा । तिमि के भन्छौ ?
मैले इयुले नेपालमा गरेको धेरै जसो कामको बारेमा असहमति राखे, उसले ध्यानले सुनेको जस्तो गरी।नेपालमा गरिएको सोसल इन्जिनियरिंगसग मेरो असहमति थियो ।
अहिले स्पेनको क्याटलोनिया राज्य विवादको बारेमा इयुको मौनता बारेमा कुरा गरे । केहि बोलिन उ । केहि महिना अगाडी क्याटलोनिया राज्यमा भएको जनमत संग्रहमा बहुमत क्याटलोनियबासीले स्पेनबाट स्वत्तन्त्र हुने माग गरेकाथिए ।
मैले फेरी थपे,हो हाम्रोमा आन्तरिक समस्या छन् तर त्यो नेपालले नै समाधान गर्छ । मेरो देशको आन्तरिक समस्या उसलाई थाहा छ या छैनमैले केहि भनिन तर कुरा सुनिरही ।
उसको गिलास रित्तिएको थियो । अगाडी बारको नजिकै लाइव गीतको धुन सुनिन्थ्यो । उतैबाट एक जना लम्बु बिदेशी केटा आयो।केटीको गिलासमा बियर भर्न बारतिर नै गयो ।
उसले भनी, उही हो मेरो केटासाथी । उ गिलास भरेर आयो, चिनापरिचय भो, इमेल आदानप्रदान पनि । केटा रमाइलो रहेछ । पोखरा घुमेको । नेपाली भनेपछि चाख दिने ।
मैले मनमनै गुने हाम्रो प्रोजेक्ट झन्डै धरापमा पर्नुमा तिम्रो धेरै हात रहेछ ।
मेरो मेसेनजरमा नेपालबाट बिजुली मेसेज आयो श्रीमतीको, मेरो कलेजको अन्तिम २ पिरियड भएन । कुरा गर्न मन लाग्यो । कता छौ ?
ती दुई डच केटाकेटीसँग बिदा हुदै मैले मेसेज फर्काए ।